Olee otú iji tọghata AVCHD ka QuickTime on Mac?
1.1 AVCHD Ntụgharị
1.2 AVCHD ka DVD
1.3 AVCHD ka MP4
1.4 AVCHD ka AVI
1.5 AVCHD ka MOV
1.6 AVCHD ka MKV
1.7 MKV ka AVCHD
1.8 AVCHD ka YouTube
1.9 AVCHD ka Adobe Premiere
1.10 AVCHD ka FFmpeg
1.11 AVCHD ka QuickTime
1,12 AVCHD ka H264
1,13 AVCHD ka WMV
1,14 AVCHD ka MPEG
1,15 AVCHD ka Final Cut Pro
1,16 AVCHD ka ProRes
2.2 AVCHD na VLC
Ma gụọ 2.3 AVCHD on iPad
2.4 AVCHD on PS3
3 Atụmatụ & Aghụghọ
3.1 Gịnị bụ AVCHD
3.8 AVCHD na breeki aka
3,10 Import AVCHD ka Final Cut Pro
3,11 AVCHD Iweghachite
3.12 AVCHD File Structure
Part 1: Gịnị QuickTime pụrụ imeghe AVCHD faịlụ?
Part 2: Jiri Wondershare Video Converter Ultimate for Mac
Nkebi nke 3: Atụmatụ na otú nyefee AVCHD vidiyo si na camcorders ka Mac
Ọ bụ-ahụ kwuru na AVCHD format bụ otu nke kasị mma formats na ike-na-egwuri na ọ bụla n'elu ikpo okwu nke ụwa na ala na afọ ojuju. Ọ bụ ya mere na-kwuru na irrespective nke windows na Mac Ọkpụkpọ bụ playable ọbụna ma ọ bụrụ ọ bụla ọzọ ngwá ọrụ na-adịghị ebudatara na mmekọrita Mac. The QuickTime ọkpụkpọ na e mepụtara site na Apple Inc na e agbakwunyere n'ime Mac bụ ihe na nwere ike igwu na ka ọrụ ese ọ bụla video nke ọ bụla genre gụnyere AVCHD video. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na njehie na-nnọọ obere ka QuickTime na-mgbe kwalite na nke kacha mma n'ụzọ na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma nche dị ka mma. Mgbe ụfọdụ Otú ọ dị onye ọrụ bụghị nanị chere ihu na nke kamakwa odụk nke mgbe ọ na-abịa na-eduzi faịlụ AVCHD faịlụ egwu na-akpọ na na Mac QuickTime ọkpụkpọ. A nkuzi n'ihi ya ka e mepụtara iji jide n'aka na ihe kasị mma na-nyere ka onye ọrụ na okwu nke QuickTime ojiji na AVCHD faịlụ. Ọ ga-emekwa n'aka na ọkaibe Atụmatụ na usoro na-abụghị nanị nyere ma ha na-kọwakwara mere na mmejuputa-aghọ mfe ma dị irè.
Part1: Gịnị QuickTime pụrụ imeghe AVCHD faịlụ?
The QuickTime bụ ihe kasị vasatail na otu onye nke kasị mma egwuregwu iji jide n'aka na-ọrụ nke Mac OS mgbe-esi n'ime mbipụta na nsogbu mgbe ọ na-abịa na-akpọ dị iche iche formats. N'aka nke ọzọ, ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ nwere ike na-esiri ike na jupụtara mbipụta iji jide n'aka na AVCHD format na-egwuri. Mgbe ụfọdụ ndị ọrụ onwe ha adịghị ike ịchọta AVCHD faịlụ na na-ma echekwara na diski ma ọ bụ ọrụ nwere depụtaghachiri ha ka ha na ike draịva. N'ọnọdụ nile dị otú ndapụta ọ na-gwara iji jide n'aka na ndị na-esonụ usoro a soro iji jide n'aka na ihe kasị mma na-nyere ka ọrụ na ha ga-esi arụpụta ihe kasị mma na nke a.
Mgbe igwefoto na-plugged na yiri nchekwa bụ a ga-emeghe:
The AVCHD icon bụ mgbe ahụ na-nri pịrị iji jide n'aka na-emeghe QuickTime ọkpụkpọ nhọrọ họrọ:
The QuickTime ga-niile faịlụ ndị a ga-emeghe ma ọ bụ na ihe ọkpụkpọ nwere ike imeghe na ala na afọ ojuju:
Usoro na e kwuru n'elu bụ mfe ma dị mfe na-eso ka ma ọ bụrụ na onye ọrụ odụk nsogbu mgbe ahụ ọ na-gwara iji jide n'aka na Apple Inc. online obodo na-kpọtụụrụ na-nke ofu na ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ dị ka mma.
Part2: Jiri Wondershare Video Converter Ultimate for Mac
Iji jide n'aka na AVCHD converted ka QuickTime akwado Ọkpụkpọ doro software bụ ihe kasị mma na ọ na-eme n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe ọrụ enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Mmepe ntụgharị Wondershare mere n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe ọrụ enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu na Ya mere ojiji nke usoro ihe omume nakwa na e mere mfe na mfe. Iji nweta nsonaazụ kacha mma na nke a ọ na-gwara iji jide n'aka na ndị na-esonụ na-soro na-dozie nsogbu na nke kacha mma n'ụzọ na-eme ka n'aka na ọgwụgwụ N'ihi na a nwetara dị na akara na chọrọ nke njirimara:
Onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na usoro ihe omume ebudatara, arụnyere na na na oru. The download njikọ pụrụ ike na URL http://www.wondershare.com/mac-video-converter-ultimate/guide.html
Onye ọrụ ahụ kwesịrị iji jide n'aka na abụọ elu akụ a pịrị mere na chọrọ format họrọ na video converted na ala na afọ ojuju:
Ozugbo ọ e mere onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na tọghatara button họrọ iji jide n'aka na usoro-agwụ ebe a na akakabarede QuickTime enyi na enyi format a mere enweghị ihe ọ bụla na-egbu oge:
Part3: Atụmatụ na otú nyefee AVCHD vidiyo si na camcorders ka Mac
Ọ bụ-ahụ kwuru na iMovie ma ọ bụ ndabara video na foto akada software jide n'aka na camcorder achọpụtara na ọdịnaya na-egosi na enyemaka nke ụfọdụ clicks. Njikọ kwesịrị mere a ga-guzobere iji jide n'aka na needful na-eme. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma na-nyere ka usoro site na ịpị njikọ bọtịnụ mwube iji jide n'aka na enyemaka ngalaba na meghere na needful na-eme.
The iMovie-akwado nnọọ ejedebeghị video formats na maka otu ihe ahụ ọ bụ-ahụ kwuru na kwesịrị ekwesị format ga-họọrọ megide camcorder na e plugged na ọ ga-ahụ na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe results. Ọ bụ iMovie software na-enye ohere onye ọrụ bụghị nanị na-echekwa data na nke kacha mma n'ụzọ ma na-enye ohere onye ọrụ iji na-enweta kasị mma na ndị ọkaibe pixel definition. Nke a iMovie software na-enye ohere onye ọrụ na-eme ka n'aka na video na-edited na ndị chọrọ results na-enwetara na nke kacha mma n'ụzọ.
The videos nwekwara ike dị ka Mac tupu ha na-dị ka iMovie na ọ bụ ụzọ kasị mma iji jide n'aka na ọ bụ nanị ndị na fim na ihe osise AVCHD format na-echekwara na iMovie nke ọrụ chọrọ na ndị fọdụrụ bụ kpọmkwem na discarded si Mac ka anya dị ka oke ẹnamde. The videos nwekwara ga-dezie na obere agba iji jide n'aka na ndị na-erughị ohere na-gwusia. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na e kwuru okwu bụ ihe kasị mma na nke kasị vasatail usoro nke na-eme n'aka na needful a mere na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma ohere nchekwa eweta dị ka ọ bụ a n'ọnụ nke nnọọ ole na ole online forums ma ọ bụ na nyiwe na-ekpughe.
QuickTime Rotator: Olee bugharia QuickTime Videos
Olee otú iji tọghata WMV ka QuickTime na Windows ma ọ bụ Mac OS X Odum
Olee otú bulite QuickTime vidiyo na YouTube on Mac
Perian bụ kwa ochie maka QuickTime!
5 Atụmatụ maka QuickTime ndepụta okwu
Edozi: 3 'QuickTime-adịghị arụ ọrụ' ikpe
Nchọpụta nsogbu Atụmatụ maka The Common QuickTime Issues
Olee Otú M Pụrụ Wụnye QuickTime 7 N'ihi na Mountain ọdụm?
QuickTime adịghị arụ ọrụ na Mountain ọdụm? Resovled (Mavericks akwado)
> Resource> QuickTime> Olee otú iji tọghata AVCHD ka QuickTime on Mac?